Myanmar Eases Travel Restrictions for Foreigners | Myanmar Business Today
HomeFeaturedMyanmar Eases Travel Restrictions for Foreigners
Myanmar has revised travel restrictions for foreign visitors, removing some areas in four states and two regions from the restricted-area list and addinganumber of new ones, according to the Ministry of Hotels and Tourism.
The places in Mon State where travel ban has been lifted are Kaylartha Taung, Kyaukpi Pagoda, Kyauktakhar Pagoda, Myatabeik Pagoda, Welkali hot springs, Panga Salt Field, Death Railway, Thanbyuzayat War Cemetery, Kyaikkhami Yele Pagoda and Set Se beach. Travelers will need permission from local authorities to visit areas outside Kyaikmayaw and Thanbyuzayat townships.
The travel ban has been lifted in Putao and Machanbaw townships, among other areas in Kachin State; 11 places in Kayah State; seven places in Shan State; three places in Mandalay Region and four places in Tanintharyi Region.
“Restricted areas for foreign travelers are set by the Ministry of Internal Affairs. The Ministry of Hotels and Tourism then cites their data to inform travelers,” U Khin Maung Soe, Director General of the Ministry of Hotels and Tourism, told Myanmar Business Today. “This is to protect foreign travelers and enable them to travel safely. They can avoid restricted areas by looking at our list.”
A travel ban for foreign nationals has been imposed in some new locations due to security concerns. These include Ponna Kyun, Mrauk U and Min Pyar townships in troubled Rakhine State and Platwa in Chin State.
Pyin Oo Lwin, one of the most visited cities in Myanmar, has been put on the travel ban list following the August 15 surprise rocket attack by an armed ethnic group. Foreigners will need permission to venture outside the city, although they can visit the city proper.
Mogok, Thabeikkyin, Kyundai, Nyaungdon, Thabyay Chaung, Mogyo Pyit, Padigon, Naung Pain and Meadow in Mandalay Region have been on the restricted list since 2016.
With restrictions recently imposed on seven new locations in Kachin State, 19 locations in Sagaing Region, two locations in Shan State, 13 locations in Shan State and one location in Yangon Region, the list now includes 100 places.
Myanmar received over 3.14 million foreign tourist arrivals between January and September 2019, an increase of 621,286 people or 25 percent from the same period last year.
နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများအတွက် လုံခြုံရေးအရ သွားလာခွင့်ကန့်သတ် နယ်မြေစာရင်းပါ နေရာအချို့ဖြေလျှော့ပေး
လုံခြုံရေးအရ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ သွားလာခွင့် ကန့်သတ်ထားသည့် နယ်မြေစာရင်းတွင် ပြည်နယ် ၄ ခုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၂ ခုမှ နေရာအချို့ကို ခရီးသည်များ သွားလာနိုင်ရန် ဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သွားလာခွင့် ကန့်သတ်နယ်မြေများအဖြစ်ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်သည့် အကြောင်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကား၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သွားလာခွင့်ကန့်သတ်ထားသည့် ဧရိယာစာရင်းများကို ဖော်ပြထားသည်။
ဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည့် ပြည်နယ်လေးခုမှာ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကေလာသတောင်၊ ကျောက်ပိဘုရား၊ ကျောက်တံခါးစေတီ၊ မြသပိတ်စေတီ၊ ဝဲကလိရေပူစမ်း၊ ပငဆားတွင်း၊ သေမင်းတမန်ရထားလမ်းပြတိုက်၊ မဟာမိတ်စစ်သင်္ချိုင်း၊ ကျိုက္ခမီရေလယ်ဘုရားနှင့် စက်စဲကမ်းခြေတို့ကို သွားလာနိုင်ရေးအတွက် ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီး ကျိုက်မရောမြို့နယ်နှင့် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ မြို့ပြင်သို့ သွားလာမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ပူတာအိုမြို့နယ်နှင့် မချမ်းဘောမြို့နယ်များကို သွားလာနိုင်ရန် ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီး ကယားပြည်နယ်တွင် နေရာ ၁၁ခု ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် နေရာ ၇ ခု ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာ ၃ ခု နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာ ၄ ခုတို့ကို အသီးသီးဖြေလျှော့ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေမသွားရမဲ့နေရာ ကန့်သတ်နေမြေတွေကို ပြည်ထဲရေးက သတ်မှတ်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည်ကိုးကားပြီး ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုဒ်မှာ တင်ပေးတာပါ။ ဒီလိုလုပ်ရတာကလဲ ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်တာပါ။ ဒါမှလည်း သိရှိပြီး လိုက်နာနိုင်မှာပါ” ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်စိုးက MBT သို့ ပြောသည်။
လုံခြုံရေးအရ အချို့သော နေရာများကို သွားလာနိုင်ရန် ဖြေလျှော့ပေးခဲ့သော်လည်း အခြားသောနေရာများကို ယခင်အတိုင်း ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိဘဲ ကန့်သတ်ထားသည့်အပြင် အချို့သောနေရာများကိုလည်း တိုးမြှင့် ကန့်သတ်ထားလိုက်သည်။
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ လုံခြုံရေးအရ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ မသွားရန် ကန့်သတ်ထားသည့် နယ်မြေစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မြောက်ဦးနှင့် မင်းပြားမြို့နယ်သုံးခု ပါဝင်သည်။
ထို့ပြင် ချင်းပြည်နယ်တွင် ပလက်ဝမြို့သို့ သွားလာခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မိုးကုန်၊ သပိတ်ကျင်း၊ ကျွန်းတိုင်၊ ညောင်တုန်း၊ သပြေချောင်း၊ မိုးကြိုးပစ်၊ ပုတီးကုန်း၊ နောင်ပိန်၊ မဲတောကျေးရွာများကို ၂၀၁၆ခုနှစ်မှစတင်ကန့်သတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပြင်ဦးလွင်မြို့သို့ သွားလာခွင့်ကိုပါ ကန့်သတ်ထားလျက်ရှိသည်။
ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် သြဂုတ် ၁၅ ရက်က ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှှုခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် သွားလာမည်ဆိုပါက မြို့ပေါ်၌သာ သွားလာခွင့်ပြုထားပြီး မြို့ပြင်သို့ သွားလာမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရမည်ဟု အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အလားတူ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကန့်သတ်နယ်မြေ ၇ခု ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် နယ်မြေ ၁၉ ခု ၊ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ၂ ခု ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းတွင် ၁၃ခု ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁ ခု ကို ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ နယ်မြေအသစ်များ ကန့်သတ်ထားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုမှာ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခရီးသည် ၃၁၄၄၂၇၀ ဦးအထိ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ခုနှစ် ကာလတူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ခရီးသည် ၆၂၁၂၈၆ဦး (၂၅ ရာခိုင်နှုန်း) အထိ ပိုမိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Previous articleHttpool Named Facebook Sales Partner for Myanmar, Cambodia, Laos
Next articleThai Investors Eye Comprehensive Tourism Investment in Tanintharyi